Masindahy Thierry du Mont d'Hor
01 jolay — Teraka tao Homécourt tao Marnes i Masindahy Thierry, ary maty tao Reims ny taona 533. Zanaka tompomenakely sady jiolahy mpandroba an-dalambe antsoina hoe Marcard izy. Tamin’ny andro nanaovana ny mariaziny no nahatsapany ny fiantsoan’Andriamanitra azy mba hiroso amin’ny fiainan’ny mpitoka-monina.
Marihana fa io mariazy nataony io dia ny rainy no nanery azy mba hanambady. Niezaka nandresy lahatra ny vadiny izy mba hidirany amin’ny fikambanan-drelijiozy ka mba hafahany manao izany fiainan’ny mpitoka-monina izany. Nefa moa nandà ilay ramatoa. Nanatona ny evaka tao Reims izy. Ary i Thierry no nilazalaza izany faniriany izany, ka teo indindrindra no mba niangavian’ny Thierry mba hanafoana ny mariazin’izy ireo ka handefa ny vadiny izay mbola virjiny hody any amin’ny ray aman-dreniny. I Thierry tamin’izay fotoana izay notazonin’ny evaka tao Reims ho isan’ny pretrany.
Notanterahin’i Thierry ny antson’Andriamanitra hanaraka an’i Kristy sy handao ny zavatra rehetra. Lasa tokoa izy araka ny iraka nampananovin’ny evaka tao Reims azy ny mba hanokatra trano fitokana-monina. Nankany amin’ny toerana antsoina hoe Mont d’Or izy. Nonina tany anaty ala tany ary nitoka-monina tao, nivavaka sy niasa ny tany. Maro ny mpianany nanaraka azy tany. Taty aoriana dia ny rain’i Thierry mihitsy no lasa mpianany. Rehefa nibebaka io rainy io dia nanaraka azy ihany koa tamin’izany lalan’ny fitokana-monina izany. Taty aorina dia nataon’ny mpanjaka toerana fakana aina rehefa avy any amin’ny Sorona tany Reims io toerana io. Ary tamin’ny taonjato faha-18 dia nataon’ny arseveka fialana sasatra isaky ny lohataona izany toerana izany. Rava izy io avy eo fa nanomboka ny taona 1968 dia ireo mpitoka-monina bénédictins no nipetraka tao amin’ny izay teorana sisa tsy rava. Marihina fa nampitondraina ny anaran’i Masindahy Thierry io tanana io taty aoriana.